Xisbi loogu magacdaray Dimuqraadiyada iyo la dagaalanka musuqmaasuqa oo Muqdisho looga dhawaaqay | raascasayrmedia.com
← Madaxweyne Shariif iyo wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray Magaalada Addis Ababa
Ciidamada Dowladda oo dad ku laayay magaalada Muqdisho. →
Xisbi loogu magacdaray Dimuqraadiyada iyo la dagaalanka musuqmaasuqa oo Muqdisho looga dhawaaqay
Xisbi cusub oo lagu magacaabo, Barnaamijka Dimuqraadiyadda iyo la dagaalanka Musuqmaasuqa (Somali Anti-corruption and Democracy Initiative), ayaa maanta looga dhawaaqay magaalada Muqdisho, kaasoo la sheegay in qorshe howleedkiisu uu yahay mid looga hortagayo musuqmaasuqa ka taagan Soomaaliya.
Xisbigan, ayaa waxaa ku dhawaaqay wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya, xildhibaan Farxaan Cali Maxamuud, isagoo sheegay in muddo lix bilood gudadhood ah uu kusoo dhisi doono xubnaha xisbigan, sidoo kalena uu kusoo diyaarin doono xeerarka shaqo ee barnaamijkan.
“Waxaan la dagaalamaynaa, musuqmaasuqa ka taagan Soomaaliya. Runtiina waxaa markhaati u ah musuqmaasuqa dalka ka jira, in Soomaaliya ay sannad walba kaalinta koowaad ka gasho dalalka uu musuqmaasuqu hareeyay,” ayuu yiri mudane Faraxaan.
Mudanuhu, wuxuu sidoo kale sheegay in ujeeadoodu aysan ahayn mid ay dano gaar ah ka leeyihiin, balse ay ugu talogaleen inay si sharci ah wax u saxaan, iyagoo kaashanaya cid walba oo kasoo horjeeda musuqmaasuqa iyo wax isdaba-marinta.
“Dhibaatada dalkeenna ka jirta, ma ahan mid eersanaysa madfaca dhacaya, balse madfaca waxaa sababay musuqmaasuqa, waayo cid walba oo mas’uul noqota sidii ay doonto ayay awoodda dalka ugu takri fashaa, waana taas midda dhalisay dhibka maanta taagan,” ayuu yiri xildhibaan Farxaan.
Sidoo kale xildhibaanku, wuxuu sheegay inay la xisaabtami doonaan mas’uuliyiinta dowladda Soomaaliya, si loo saxo khaladaadka jira, isagoo xusay inay la shaqeyn doonaan dhammaan hay’adaha kala duwan ee dowladda, sida baarlamaanka, kuwa sharciga.
“Barnaamijkaan, waa mid aan uga hortagayno musuqmaasuqa. Waxaan ku talo-jirnaa inaan sameyno qorshe howleed shan sano illaa toban sano ah oo wax looga qabanayo musuqmaasuqa Soomaaliya ka jira,” ayuu mudane Farxaan ka sheegay hadal uu ka jeediyay furintaankii xisbigan cusub.
Xaflada furitaanka, waxaa kasoo qaybgalay xildhibaano ay ka mid ahaayeen Prof. Maxamed Cabdi Gaandi oo horay u soo noqday wasiirka difaaca Soomaaliya, Prof. Maxamed Cumar Dalxa, Cabdi xaashi C/llaahi iyo xubno kale oo isugu jiray, bulshada rayidka, fanaaniin, aqoonyahanno iyo marti-sharaf lagu casuumay xafladda.
Wasiirkii hore ee warfaafinta DKMG ah, wuxuu sheegay inay u kaashan doonaan la dagaalanka musuqmaasuqa bulshada rayidka ah, isagoo xusay in habka ay raaci doonaan uu yahay mid sharciyeed, balse aysan jiri doonin inay meel cidlo ah qof ka eedeeyaan.
“Sababta, aan xisbigan ugu dhawaaqnay waa inaan u dagaalano in dalka uu ka baxo musuqmaasuqa, sidoo kalena uu qof walba oo Soomaali ah uu helo xuquuqdiisa guud iyo middiisa gaarka ah,” ayuu yiri xildhibaan Farxaan.
Gabagabadii khudbaddiisa, oo ahayd tii ugu dheereyd ee laga jeediyo xafladii lagu furay xisbiga uu hoggaamiyaha ka yahay, ayuu ku sheegay inay xoogga saari doonaan in madaxda dalka loogula xisaatami lahaa howlahooda, si kutakri-fal awoodeed iyo mid dhaqaale ay meesha uga baxdo.
Beesha Calaamka, shacabka Soomaaliyeed, hay’adaha wuxuu ka codsaday inay ka geystan gancan sidii uu barnaamijkan ku guuleysan lahaa, isagoo sheegay in hadafka ugu dambeeya ee ay higsanayaan uu yahay in dalka lagu hago dimuqraadiyad iyo cadaalad.
Xildhibaannadii kulanka, kasoo qaybgalay oo iyaguna hadallo ka jeediyay xaflada ayaa waxay soo dhaweeyeen xisbiga, iyagoo sheegay inay ku garab-taagan yihiin xildhibaan Farxaan, iyagoo ka codsaday xildhibaanka, inuu qorshaha ku darsado, sidii uu uga hadli lahaa musuqmaasuqa caalamku ku hayo dalka Soomaaliya.
One response to “Xisbi loogu magacdaray Dimuqraadiyada iyo la dagaalanka musuqmaasuqa oo Muqdisho looga dhawaaqay”
Thanks a lot for spending some time to explain the terminlogy to the starters!